Ireo lehilahy enina kosa "sous contrôle judiciaire" na mandalo isan-kerinandro any amin'ny mpitandro filaminana hamarinina, araka ny fampitam-baovao ofisialin'ny polisim-pirenena. Manoloana ny lalana mifehy ny soram-panambadiana izay araraotin'ireo teratany vahiny hanatanterahana trafikana olona dia miandrandra fanavaozana hifanaraka ny toetr'andro ny olom-pirenena tsara sitrapo. Tsy kely lalana mantsy ny ratsy ka manararaotra ny fahantran'ny teratany Malagasy izay gidany maneran-tany. Etsy andaniny anefa tsy ny teratany Sinoa manambady gasy rehetra kosa dia misain-dratsy hanondrana vehivavy avokoa. Mitaky fandalinana lalana vaovao ity tambazotram-panambadiana Sonia ity hisorohana ny loza ahiana hitranga any ivelany. Ireo lasa miasa any ivelany ihany mantsy no ren'ny fitondrana izay mijoro ny kiakiakany fa ireo mijaly am-panambadiana na hampanaovina zavatra hafa mamoehitra tsy misy fanaraha-maso.